Shirweynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka oo la soo gabagabeeyay. – STAR FM SOMALIA
Faahfaahino Qarax Lagu Weeraray Hotelka NASA-HABLOOD2
Janeraal Mahad Cabdiraxmaan Ayaa Ka warbixiyey Shaqaadadii Ka Dhacday Wadada Maxkamada Gobalka Banaadir(Daawo)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble oo ka Hadlay Dagaaladii ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inuu aad uga xunyahay dhibaatadii dhacday ee lagu khalkhal gelinayay Ammaanka iyo Nabadda caasimadda.
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in deegaano ka tirsan gobolkaasi uu dagaal khasaaro geystay ku dhexmaray ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya markii ay weerareen deegaan hoosyimaada deegaanka Moqokori oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsanaa Al-Shabaab.
Ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti ayaa weerarkaas siwadajir ah u fuliyeen,isla markaana ay deegaankaas la wareegeen.
Sidoo kale waxaa wararka kale e nasoo gaaraya ay sheegayaan in Ciidamada dowlada ay isaga soo baxeen deegaankii ay la wareegeen,isl markaana ay dib ugu soo laabteen deegaanka Moqakori oo ay markii hore ka tageen.
Sikastaba Al-Shabaab weli kama hadlin dagaalkaas dhexmara Ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti oo dhinac ah iyo Al-Shabaab